Ikomidi elisha lemisakazo yomphakathi eKZN | News24
Ikomidi elisha lemisakazo yomphakathi eKZN
AQALE ukusebenza ngenyanga edlule amalungu ekomiti elisha elikhethelwe ukwengamela izindaba zemisakakazo yemiphakathi KwaZulu Natal. La malungu ayisikhombisa akhethwe yi-National Community Radio Forum-KwaZulu Natal, (NCRF-KZN) eyaziwa ngeKZN Community Radio hub.
Ukukhethwa kwala malungu kungukuqinisekisa ukuthi umsebenzi wokwengamela indlela imisikazo yemiphakathi esebenza noma ephathwa ngayo uyaqhubeka futhi uba sezingeni eliphezulu kanti lokho kwenzeke ngendlela egculisayo nengakhethi bala lamuntu, kusho unobhala walo leli komiti uMnu Muzi Sibiya.
USibiya ungumphathi wesiteshi somphakathi sakhona kuleli dolobha UMgungundlovu FM.
Utshele i-Echo ukuthi i-NCRF-KZN izokuqinisekisa ukuthi ikomiti leli lisebenza ngendlela futhi lithatha izinga lale misakazo liyibeke eqophelweni eliphezulu.
“Lokhu kuzokwenzeka ngaphandle kokuthi kube khona ukukhetha ngokobuzwe, ubulili noma ngokwezindawo. Ikomiti leli linamalungu abesilisa ayisihlanu kanti amalungu esifazane wona mabili.
“Leli komiti liphinde lidlulise ukubonga kwikomiti ebekuyilo ebelibambe izintambo ngaphambilini. Kuyancomeka konke abakwenzile futhi bekwenze ngendlela efanele neqondile.
“Sincoma ukusebenza kwabo ukukhulisa umnyango wezemisakazo esifundazweni sethu.
“Okunye okugqamile abakwenzile wukuqhamuka nemiqingo yendlela yokusebenza esigabeni semisakazo yemiphakathi nomgqingo oqukethe indlela okuhlelwe ngayo ukusebenza,” kusho uSibiya.
Usihlalo wekomidi uMnu Simon Ntsele ubonge imiphakathi ngokubeseka njengemisakazo yemiphakathi wathi: “Asiphinde sibonge kakhulu imiphakathi esiyisakazelayo ngokuseseka nokuselekelela kulo msebenzi.
“Likhulu iqhaza elibanjwa imiphakathi ngendlela yokuthi size siyithole isiyakhe imifelandawonye ebizwa ngezinhlangano zabalaleli ngenhloso yokulekelelana ngezinto ezakhayo empilweni.
“Asithembele kakhulu futhi emiphakathini yakithi ukusinikeza ingqikithi (content) yezinhlelo esizisakazayo. Yingakho nathi sizishaya izifuba ukuthi silekelela kakhulu ekubumbeni isizwe, ikakhulukazi iKwaZulu-Natal,” kubeka uNtsele.
malungu akhethiweekomidi yilawa:
•Usihlalo uMnu Simon Ntsele (umphathi weMaputaland FM )
•Isekela kilanobhala uMnu Nhlanhla Mtshali (usekela sihlalo weNewcastle FM)
•Unobhala uMnu Muzi Sibiya (Umphathi wo-UMgungundlovu FM)
•Isekela likanobhala uMnu Simphiwe Makhamba (umphathi we-ITheku FM)
•Umphathi-sikhwama uMnu Thulani Zulu (umphathi weShine FM)
•Ilungu le-executive committe uNksz Nonhlanhla Ndlovu (umphathi weNqubeko FM )
•Ilungu le-executive committe uNksz Michele Coetzee (Umphathi weGoodNews FM) (pic will follow)